Sivame ukubona izithombe ezinhle zesibhakabhaka nemvelo, okubukeka sengathi zithathwe ngumthwebuli wezithombe okhokhelwayo onemishini ebizayo. Lolu hlobo lokuthwebula izithombe, olubizwa ngokuthi yi-long exposure photography, lungatholakala cishe noma ngubani onanoma yiluphi uhlobo lwekhamera, olungenza ngisho nesimo esicashile kakhulu sibonakale sithakazelisa. Kunezindlela ezahlukahlukene zokufeza ukuthwebula okuhle, kufaka phakathi izinhlobo ezahlukahlukene zemishini, njengezihlungi, ama-tripod, futhi okubaluleke kakhulu, ukubekezela.
Kuyini ukuthwebula izithombe isikhathi eside?
Ukuthwebula izithombe isikhathi eside kuyinhlanganisela ye- isivinini se-shutter, ukugxila, nokukhanya. Ingenye yezinhlobo ezithandwa kakhulu zokuthwebula izithombe futhi imiphumela emihle ingatholwa cishe yinoma ngubani. Lolu hlobo lokuthwebula luyindlela yobuciko yangempela, njengoba umthwebuli zithombe kufanele asebenzise umcabango wakhe ukubona ngeso lengqondo indawo yesehlakalo nokuthi izobukeka kanjani. Kudinga nolwazi oluncane mayelana nezilungiselelo zekhamera nokusebenza, kufaka phakathi izihlungi nokulungisa isivinini se-shutter.
Akunandaba ukuthi ungumuntu osemusha noma ungumthwebuli wezithombe onolwazi, le kuyindlela enhle yokwenza izithombe zokubamba iso. Kungenza nokuthi isihloko esilula sibukeke sihlukile, futhi singenza umthwebuli zithombe osemusha abukeke njengochwepheshe!
Shintsha izilungiselelo zakho
Yize lolu hlobo lokuthwebula lulula ngandlela thile, kunezindlela ezahlukahlukene zamasethingi wekhamera okumele acatshangelwe ukufeza imiphumela ehlosiwe. Izici ezithile ezifana nejubane le-shutter kanye nokukhishwa kwe-shutter yizingqinamba zesibhamu esifanele.
Ijubane le-shutter inani lesikhathi lapho i-shutter yekhamera ivuliwe. Ukuthola izilungiselelo ze-shutter kahle kubalulekile kulolu hlobo lwezithombe, ngoba kuzolawula ukuthi ukukhanya nezinye izinto kusabela kanjani. Kodwa-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi ungashiyi i-shutter ivulekile isikhathi eside kakhulu, ngoba isithombe singase sivezwe ngokweqile. Ngakho-ke, ukusebenzisa i-shutter setting ephansi kuqinisekisa ukuthi isithombe ngeke sivezwe ngokweqile futhi isibhamu sibukeka siqeqeshiwe kakhulu. Ezinye izinhlobo zemishini, njenge ehlunga elawula ukuthi kungakanani ukukhanya okungena kwi-lens kungenza umehluko ophawulekayo ekudutshulweni kwakho.
Yiba Nemishini Elungile
Kunemishini ehlukahlukene etholakalayo ukusetha isibhamu esihle. Okubaluleke kakhulu, kubalulekile ukuba nekhamera ezinzile futhi egxilile ezokhulisa amandla wesithombe esimnandi. Ngaphezu kwalokho, ukukhanya okufanelekile kubalulekile impela, ngakho-ke kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ikhamera yakho inejubane le-shutter mathupha nezilungiselelo ze-ISO. I-tripod nayo ibaluleke kakhulu, ngoba izoqinisekisa ukuthi ikhamera ibanjwa inganyakazi ngenkathi i-shutter yakho iqoqa ukukhanya endaweni oyikhethile.
Indawo ingukhiye esithombeni esifanele. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu endaweni efanele ukuthi ukukhanya kungakanani. Ukukhanya kuvumela isibhamu sakho ukuthi sinikeze umbono wokuhamba, njengabantu abahambayo, amagagasi ashayisanayo, noma amafu ahambayo. Ngoba ukudutshulwa okude kuzobukeka kwehluke ngokuphelele kunalokho ukubukeka kwesibhamu empilweni yangempela, ukuba nomcabango ocacile kuyisihluthulelo sokucabanga ukuthi isithombe sizobukeka kanjani.
Abathwebuli bezithombe abaningi bayakhetha Idolobha izikhungo ezinokukhanya okukhulu okuphuma ezimotweni nasezakhiweni. Nature kungenye indawo ethandwayo, njengoba ukukhanya kwemvelo kwezinkanyezi ebusuku kuvumela ukudutshulwa okude kakhulu. Kubaluleke kakhulu ukuvakashela indawo ngaphambi kweseshini yakho yezithombe, njengoba udinga ukusebenzisa ingqondo yakho yokudala ukunquma ukuthi izifundo zakho zizohamba kanjani lapho isithombe sithathiwe.
Sebenzisa Isihlungi Sakho Sokungathathi hlangothi Lapho Wenza Ukuthwebula Isikhathi Eside
Isihlungi sesibalo esingathathi hlangothi sinquma ukuthi kungakanani ukukhanya okungena kulensi yekhamera. Lesi yisici esibucayi sokuthwebula izithombe isikhathi eside, njengoba ukukhanya kungenye yezici ezibaluleke kakhulu zesithombe. Lokhu kubaluleke kakhulu ekuthatheni izithombe zobusuku obude obude, njengoba kuvumela ukukhanya okuncane ku-lens, kwakha indawo ebabazekayo. Ngokwengeza isihlungi se-ND kwilensi yakho, uyakwazi ukulawula kangcono ukuthi ukukhanya okungakanani okufika enzwa yekhamera yakho, futhi ekugcineni, nokuthi isibhamu sakho sibukeka kanjani.
Esinye sazo isihlungi seGraduated Neutral Density, esenza njenge-gradient ebekwe ngaphezulu kwelensi yakho, uhlangothi olulodwa luvumela ukukhanya okuningi kudlule, kanti olunye ludedela ukukhanya okuncane nokuncane kuye kwinzwa yekhamera yakho. Lokhu kuba mnyama kwesigcawu kungasetshenziselwa ukwengeza izinguquko zokukhanya ezihlanzekile kusithombe sakho. Kubathwebuli bezithombe abaningi be-novice, isihlungi sokuminyana okungathathi hlangothi kungenzeka singabi inketho, ngakho-ke, kunamaqhinga athile okulingisa inkohliso enikezwe ngesihlungi se-ND.
Enye yezindlela ezaziwa kakhulu zokuthola lokho kudubula okuhle ngaphandle kwesihlungi se-ND ukukhulisa isivinini se-shutter yekhamera ngokuyibeka kwesinye sezilungiselelo zayo eziphansi kakhulu. Lokhu kuvumela abathwebuli bezithombe ukuthi bazuze umphumela ofanayo ngaphandle kwentengo yesihlungi.
Gxila Esihlokweni Futhi Thatha Isithombe
Futhi ekugcineni, sekuyisikhathi sokuthatha isithombe. Ukuthatha isithombe sakho kuyindlela yobuciko kukodwa, njengoba kudinga isikhathi esanele nekhamera ukuze silunge kahle. Ngemuva kokusetha ikhamera yakho ku-tripod futhi ugxile esihlokweni sakho, sekuyisikhathi sokushintsha izilungiselelo zekhamera yakho ngokuthwebula okuhle.
Lapho uthatha isithombe, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi i-shutter yekhamera yakho isesivinini esifanele. Uma uthatha isithombe, ungasebenzisa i-autofocus yekhamera yakho noma imodi yesandla. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi uma ukhetha ukusebenzisa imodi yesandla, ulungisa i-lens yakho yokugxila kwelensi ukuze isibhamu sikhanye futhi sicace.
Into enhle mayelana nokuthwebula izithombe isikhathi eside ungakusebenzisa ukugxila okuzenzakalelayo kwekhamera kwekhamera yakho ngenkathi uthatha isithombe. Qala ngokusetha ikhamera yakho ku-autofocus, bese ucindezela inkinobho yokushutha yekhamera yakho maphakathi, bese ushintshela ekugxileni okwenziwa ngesandla. Le ndlela isetshenziswa ngabathwebuli bezithombe abaningi, njengoba ikuvumela ukuthi ugcine ukugxila okukhanyayo nokucacile, okungaba yinselele kwimodi yezandla uwedwa.
Noma kuyisikhungo sedolobha esimatasa noma indawo esemaphandleni, uqinisekile ukuthi uzothatheka yikhono lakho lokuthatha izithombe. Kodwa-ke, kunesinye futhi isilungiselelo sokuguqula. Imvamisa, ikhamera yakho izokuvumela kuphela ukuthi ubambe inkinobho yokushutha imizuzwana engamashumi amathathu. Kodwa-ke, ngokushintshela ku- "imodi ye-bulb", akunamkhawulo wokuthi i-shutter ingacindezelwa isikhathi esingakanani. Futhi ungakhohlwa, sebenzisa umcabango wakho ukusetha indawo ukuthi isithombe sakho sizovela kanjani.
Ukuthwebula izithombe isikhathi eside kuyindlela enhle yokubonisa ubuhlakani bakho kwezobuciko. Ikuvumela ukuthi ujabulele futhi wenze lula ubudlelwane nesigcawu sakho. Okubaluleke kakhulu, kubalulekile ukujabulela isipiliyoni futhi ujabule, njengoba ukuthwebula izithombe kuyindlela enhle yokuphumula nokujabulela ubungaphandle!